အဆိုပါ 2018 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား ရေးအဖွဲ့က USA အသင်းဥရောပအပေါ်ယူပြီးနှင့်တကွ, ပြိုင်ပွဲ၏ 42 ကြိမ်မြောက်ကစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုယ်စားပြုအထီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီး၏အသင်းများအားဖြင့်တိုင်းနှစ်နှစ်ကစားနေသည်။
ရက်စွဲများ: စက်တင်ဘာ 28-30, 2018
တည်နေရာ: Saint-Quentin-my-Yvelines ပြင်သစ်နိုင်ငံက Le ဂေါက်သီးအမျိုးသား (Albatros သင်တန်းအမှတ်စဥ်)
ဗိုလ်မင်း: ဥရောပ - သောမတ်စ် Bjorn; ယူအက်စ်အေ - ဂျင်မ် Furyk
အဆိုပါ 2018 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားဂေါက်ကွင်း
le ဂေါက်သီးအမျိုးသားပဲရစ်မြို့ဆင်ခြေဖုံးတွင်တည်ရှိပြီး 1990 ခုနှစ်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဒါဟာဥရောပခရီးစဉ်ရဲ့ပုံမှန်အိမ်မှာနေရာဖြစ်ပါသည် ပြင်သစ်ပွင့်လင်း ပြိုင်ပွဲ။
ဒါကတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား Continental ကဥရောပ (ပထမ 1997 ခုနှစ်တွင်စပိန်နိုင်ငံတွင် Valderrama မှာ) တွင်ရာအရပ်ကိုကြာမယ့်ဒုတိယအကြိမ် mark ပါလိမ့်မယ်။
2018 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား Format ကို
အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလား format ကိုဤကဲ့သို့သောဝင်:
နေ့ 1: လေး foursomes ပွဲလေး ဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်းများ ပွဲ (အိမ်ရှင်ကပ္ပတိန်ကဆုံးဖြတ်အမိန့်)
နေ့ 2: လေး foursomes လေးဘောလုံးလေးလုံးဘိလိယက်ကစားနည်း
နေ့ 3: တကျိပ်နှစ်ပါးဆိုရင် single ပွဲ
"ဟာမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုကြည့်ပါ ထိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားပုံစံကဘာလဲ " ပြဇာတ်၏ပုံမှန်အချိန်ဇယားအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်။
အဆိုပါအဖွဲ့က USA ကပ္ပတိန်ထုတ်ပြန်ကြေညာခံရဖို့သေးသည်။
အသင်းကိုဥရောပရဲ့ကပ္ပတိန်ယခင်ကတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက်ကစားရန်ပထမဦးဆုံး Dane ခဲ့ပွီးနောကျမှာတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားကစားသမားအသင်းခေါင်းဆောင်ယခုပထမဦးဆုံး Dane သူသည်သောမတ်စ် Bjorn ဖြစ်ပါသည်။ Bjorn သုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက်ကစားလေးယောက်ကိုအခြားသူများအတွက်ဥရောပဒုကပ္ပတိန်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ Bjorn ရဲ့ကစားပွဲအားလုံးရေးအဖွဲ့ဥရောပများအတွက်အနိုင်ရရှိ, 1997, 2002 နှင့် 2014 ရှိကြ၏။
အဖွဲ့ USA နဲ့အဖွဲ့ဥရောပနှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းကပ္ပတိန်ရဲ့ Picks နှင့်အတူရမှတ်စာရင်းမှတဆင့်အလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ရေးပေါင်းစပ်ပြီး, 12-ယောက်ျားသည်ကစားသမားကိုရွေးပါလိမ့်မယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများကိုကြည့်ပါ ကစားသမားတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက်ရွေးချယ်နေကြသည်ဘယ်လိုနေသလဲ? " လက်ရှိရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အသေးစိတျအဘို့။
အဆိုပါ 2016 တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာအဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအော်တိုရွေးချယ်ရေးနှင့်ကပ္ပတိန်ရဲ့ Picks မှတဆင့်လေးကနေတဆင့်ရှစ်ဂေါက်သီးရွေးချယ်ခဲ့သည်။ အသင်းကိုဥရောပသံခိတ် Picks မှတဆင့်အချက်များစာရင်းနှင့်သုံးဂေါက်သီးမှတဆင့်ကိုးဂေါက်သီးရွေးချယ်ထားကြသည်။
ဒါဟာသို့သော်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်ရေးလမ်းညွှန်ချက်များကိုတင်ထားရန်, ဒါကြောင့်သူတို့အားအသေးစိတ်ကြိုတင် 2018 မှပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်အဖွဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအဘို့အမရေိက၏ PGA နှင့်အဖွဲ့ဥရောပများအတွက်ဥရောပခရီးစဉ်မှတက်သည်။
အဆိုပါတစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားအတွက်အစဉ်အဆက် 10 အကောင်းဆုံးဂေါက်သီး : ဂေါက်သီးက၎င်း၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကျော်ကဤဖြစ်ရပ်ကိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရပြီဘယ်? ကျနော်တို့က 10 ကနေ 1, သူတို့ကိုနှိမ့်ချရေတွက်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားပွဲစဉ်ရလဒ်များ : ဒီနေရာတွင်တစ်ခုချင်းစီကိုနှစ်နှစ်တကြိမ်ပြိုင်ပွဲ၏နောက်ဆုံးရမှတ်များ, ဒါပေမယ့်အစဉ်အဆက်တို့သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှာကစားတိုင်းတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်များ၏ရမှတ်မသာရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးဖလားမှတ်တမ်း : အကောင်းဆုံးနှင့်အဆိုးဆုံးကအနိုင်ဂိုးရာခိုင်နှုန်းနှင့်အတူဂေါက်သီးအပါအဝင်အကောင်းဆုံးနဲ့အဆိုးဆုံး။
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ် Get လုပ်နည်းသင်ယူပါ
အဆိုပါ Evian ချန်ပီယံရှစ်
PGA Tour: အောင်ပွဲခံ၏အကြီးဆုံးမြို့ Margin
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ် RBC အမွေအနှစ်ပြိုင်ပွဲ
အမျိုးသားများအတွက်ရဲ့ဂေါက်ကွင်းထဲမှာ5အလုပ်ရှာဖွေရေးက Grand Slam Winners
PGA Tour: အဆိုပါခရီးစဉ်ချန်ပီယံရှစ်
Split များအတွက် Straddle Stretch ပုံမှန်
Loyola University ကမေရီလန်း GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
Gustav Mahler အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အင်ဒရူးဂျက်ဆန် - အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏ 7th နိုင်ငံတော်သမ္မတ
အားလုံးအချိန်ထိပ်, DC ရုပ်ပြစာအုပ်ထိပ်တန်းသူရဲကောင်းဇာတ်ကောင်
Toni Morrison ရဲ့ 'ချို' ၌ပြိုင်ပွဲနှငျ့မိဘ
Macro နှင့် Microsociology
Cupones က de alimentos မသန်စွမ်း inmigrantes y က ciudadanos
တက္ကသိုလ် Toledo ၏အဆင့်လက်ခံရေး
အဆိုပါအလယ်ခေတ် Play စ '' Everyman '' လေ့လာဖို့ကိုဘယ်လို
မက္ကဆီကန်အမေရိကန်စစ်ပွဲ: Cerro Gordo ၏တိုက်ပွဲ
Interpersonal Intelligence နှင့်အတူဖော်ထုတ်ဆုံးမဩဝါဒ ပေး. ကျောင်းသားများ
အသက်ကြီးချို့ယွင်းမှုများ, Boisea trivittatus လေးထောငျ့ကှကျ
3 အကြီးမြတ်ဆုံးဂျက်ဇ်ဂီတ-rock band
မသန်စွမ်း Las ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမရေိဓါတ်ပုံများ Requisitos imprescindibles de las
Hybrid နှင့် EV အတွက်ပြောင်းပြန်လှန်နှင့် converter (လျှပ်စစ်ယာဉ်များ)
အဆိုပါ Gap သီအိုရီဆိုတာဘာလဲ